Buugaagta Taariikh Nololeed ee ugu Fiican
Escombros, oo uu qoray Fernando Vallejo
Wax walba waxay u nugul yihiin burbur. Xitaa intaa ka sii badan, noloshu sida ay uga fogaato qaraxyada la kontoroolo ee da'da. Markaa waxaa jira burburka, kuwaas oo xusuusta muhiimka ah aan waligeed dib loo helin. Sababtoo ah dhammaantiis, xusuus ma laha taabasho ama cod leh ...
Ololka aan dhimanayn waxaa qoray Stephen Crane oo uu qoray Paul Auster
Duurjoogta Duurjoogta ah, oo ah isir -raacii dhulkii Ameerika ee qaab -dhismeedkiisa, waxay ballaarisay mala -awaalkeedii, indho -indhaynteedii iyo qaababkeedii waddan aad u weyn oo xasaasiyo kala duwan iyo caqiidooyin kala duwan ku saabsan wax walba. Marna wax sidaas u kala duwan looma tuhmi karo in laga samayn doono dal sida maanta oo kale ah ...
Dib -u -fiirinta, waxaa qoray Juan Gabriel Vásquez
Waxaa jira wax ka badan wax khatar ah oo ku saabsan kacdoonnada maanta. Ku dhawaad ​​dhammaantood waxaa la soo dhoofsadaa sharci ahaanshaha xukunka qofka ka aargoosta kan aamusan, in kasta oo xitaa aamusnaanta ay ka timaaddo aamusnaanta, ka tirtiridda lidkeeda. Markaa qofku wuxuu ku dhammaadaa, oo lagu dhex quudiyaa, oo lagu qanciyaa kicinta ...
Mudanayaasha Dila: Haweenka Dilaaga ah ee Taariikhda, waxaa qoray Tori Telfer
In dilku uusan lahayn jinsi waa mid aan shaki lahayn. Oswald, gacan -ku -dhiiglaha oo wata buuggiisa The Catcher in the Rye oo gacantiisa ku hoos jira, ama Ripper York ama xitaa "Wolf -ka Moscow" ayaa xitaa gaari kara maalmaheenna. Laakiin haa, sidoo kale waxaa jira haween jecel dambiyada ugu khiyaanada badan ...
Haweenka naftayda, ee Isabel Allende
Ogaanshaha wadnaha waddada isha waxyiga, Isabel Allende Hawshani waxa uu isu rogayaa gibriska jiritaan ee qaan-gaadhka ah ee aynu dhammaanteen ku noqonno wixii aqoonsigeenna been-abuuray. Wax iila muuqda mid dabiici ah oo waqti ku habboon, oo la jaan qaadaya wareysi dhawaan ...
Jimicsiyada xusuusta, waxaa qoray Andrea Camilleri
Waa wax la yaab leh sida maqnaanshaha qoraaga oo shaqada ku jira, maxay noqon lahayd daabacaad khalkhal gelinaysa, xad -dhaaf ah oo nolosha ah, waxay ku dambaysaa inay ku yaraato khuraafaadyada geeridiisa ka dib. Laakiin sidoo kale hab dhan oo loogu talagalay dadka caado -doonka ah oo laga yaabee inaysan waligood akhriyin qoraha oo aan waqti aad u fog ka tagin goobta ...
Dab -bakhtiiye, waxaa qoray Javier Moro
New York xitaa aad bay u xiisa badan tahay markaad booqato. Sababtoo ah waa mid ka mid ah meelaha tirada yar ee aan ilaalinayn filashooyinka laakiin xitaa ka sarreeya. Gaar ahaan haddii aad ku ogaan karto saaxiibbo wanaagsan oo ku nool dhammaan wadnaha magaalada. Maya, NY waligeed ma niyad jabin. Haddaba maxaa…